Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Selsun (ဆယ်လ်ဆန်)
Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Selsun ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်မှာ ယားယံခြင်း၊ ဦးရေပြား ဘောက်ထခြင်းအတွက် ဖြစ်ပြီး သူဟာ ဘောက်လို့ခေါ်ကြတဲ့ ခြောက်သွေ့တဲ့ အဖတ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ သူ့ကို မှိုရောဂါပိုး တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ tinea versicolor ကို ကုသဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုပါတယ်။
Selsun ကို ဆေးပညာ လမ်းညွှန်စာအုပ်များမှာ ဖေါ်ပြခြင်းမရှိတဲ့ အကြောင်းအရာများအတွက်လဲ အသုံးပြုခြင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Selsun ခေါင်းလျှော်ရည်ဟာ ရွှေ၊ ငွေ၊ နဲ့ အခြား ရတနာတွေကို အရောင်ကျွတ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းလျှော်ရည် အသုံးမပြုခင် လက်ဝတ်ရတနာတွေ အကုန်လုံးကို ချွတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ခေါင်းလျှော်ရည်ကို စိုစွတ်နေတဲ့ ဦးရေပြားထဲကို နှိပ်ပြီး ထည့်ပေးပါ။ ဦးရေပြားကို နှစ်မိနစ်ကနေ သုံးမိနစ်အထိ ထားပါ။ ပြီးရင် ရေဆေးချပါ။ နောက်တစ်ခါ ထပ်ပြုလုပ်ပြီး ရေဆေးချပါ။ ခေါင်းလျှော်ရည် အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါ လက်ကိုသေချာဆေးပါ။ အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေရဖို့အတွက် တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံး နှစ်ခါ (သို့) ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အသုံးပြုပါ။
ဆေးအညွှန်းကို သေချာစွာ ဖတ်ပါ။
Selsun® ပျော့ဆေးကို သေချာစွာ အသုံးပြုရန် အတွက်
Selsun ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ လျှော်ပြီးရင် Selsun® ဆံပင်ပျော့ဆေးကို အသုံးပြုပါ။
Selsun ပျော့ဆေးကို ဦးရေပြားနဲ့ ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
ဆံပင်ကို မိနစ်အနည်းငယ် နှိပ်နယ်ပြီးတော့ ရေဆေးချပါ။
ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာ သေချာ သိချင်ရင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သူတွေကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Selsun ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Selsun® ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Selsun® ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Selsun ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဒီဆေးကို မျက်လုံးနဲ့ ထိတွေ့မှုကနေ ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
Selsun® ခေါင်းလျှော်ရည်ကို ဆံပင် မဆိုးခင်၊ မကောက်ခင် (သို့) ဆိုးပြီး ကောက်ပြီး နှစ်ရက်လောက် ကြာမှသာ အသုံပြုသင့်ပါတယ်။ Selsun® ခေါင်းလျှော်ရည်ကို ဒီဆံပင် ပြုလုပ်မှုတွေ မပြုလုပ်ခင် ခေါင်းပေါ်ကနေ သေချာစွာ ရေဆေးချသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Selsun ဟာ အောက်ဖေါ်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
ဆံပင်၊ ဦးရေပြား ဆီထွက်ခြင်း (သို့) ခြောက်ခြင်း။
အောက်ဖေါ်ပြပါ လက္ခဏာတွေ တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်း အကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Selsun® ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Selsun® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Selsun® ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အောက်ပါအခြေအနေတွေရှိနေဆိုရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
အရေပြား ပွန်းပဲ့ခြင်း (သို့) အနာများ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီး သူများနဲ့ အသက် ငါးနှစ်အထက် ကလေးများ – တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်
ကလေးတွေအတွက် Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Selsun (ဆယ်လ်ဆန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Selsun® ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Selsun® ခေါင်းလျှော်ရည် 1% Selenium Sulfide 5, 50, 100ml.
Selsun® ခေါင်းလျှော်ရည် 1.8 % Selenium Sulfide 50, 100ml.
Selsun® ဆံပင်ပျော့ဆေး 100ml.
သင်သောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးတွေအကုန်ကို စာရင်းပြုစုထားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
Selsun®. http://www.netdoctor.co.uk/medicines/skin-and- hair/a7515/Selsun-shampoo- selenium-sulphide/. Accessed October 07, 2016.
Selsun®. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682258.html. Accessed October 07, 2016.Selsun®. http://www.netdoctor.co.uk/medicines/skin-and- hair/a7515/Selsun-shampoo- selenium-sulphide/. Accessed October 07, 2016.